Fanadihadiana momba ny RHA MA750i, headphones avo lenta | Androidsis
RHA MA750i, mampiray ny kalitao sy ny endrika am-peo
Alfonso de Frutos | | hevitra
Ny sasany aminareo tsy hahalala RHA, orinasa manam-pahaizana momba ny headphone anglisy. Ny mpanamboatra anglisy dia manamboatra nify eo amin'ny tsena espaniola noho ny kalitaon'ny vokariny, ary anio dia entinay ianao a famerenana ny headphones RHA MA750i anao.
Headset mampitambatra famaranana premium, famolavolana tena manintona sy kalitaon'ny feo izay mifaninana amin'ny faritra avo kokoa. Raha fintinina, ny traikefa taorian'ny fampiasana ny RHA MA750i dia tsy tokony ho tsara kokoa.
1 RHA MA750i: vokatra feno sy fiheverana amin'ny antsipiriany
2 Famaranana avo lenta sy famolavolana tena manintona
3 Veloma mandany fotoana amin'ny famoahana ny findainao
4 Ny kalitaon'ny feo amin'ny haavon'ny farany
5 Hevitry ny Editor
RHA MA750i: vokatra feno sy fiheverana amin'ny antsipiriany
Ny tsy ampoizina voalohany dia rehefa mahazo ny vokatra ianao ary manokatra ny boaty: tsy ny headphone fotsiny no tonga lafatra fa ny RHA dia ahitana fonosana vy tsy misy fangarony miaraka amina pad silika enina hakitroka roa amin'ny habe kely, salantsalany ary lehibe. Eny, tsiroaroa avy izy ireo avy, raha sanatria very iray ianao, dia tsy manana olana rehefa hisolo azy ireo.
Misy tsiroaroa ihany koa ny ondana antonony antonony sy salantsalany antonony roa ankoatry ny tsiroaroa ho enti-tsofina enta-mavesatra enti-manerantany izay, amin'ny alàlan'ny fampifanarahana amin'ny sofina, dia hamela Ny mpampiasa rehetra dia mankafy an'ireny pads ireny.
Raha mahita ireo zavatra ampidirina ao amin'ny headphones ireo dia azonao jerena ny fikarakarana napetraka amin'ity vokatra ity izay efa misy eto amin'ny firenentsika. Ary koa miaraka amin'ny kapila an-dohan-dRHA MA750i ary ny sofina dia misy a tranga mitondra kalitao avo lenta izany dia hahafahanao tsy ho simba amin'ny fihodinana isan'andro ny findainao, na dia sarotra be aza ny mandefa noho ny kalitaon'ny faran'ity vokatra ity.
Famaranana avo lenta sy famolavolana tena manintona
Ny olana goavana amin'ny telefaona maro dia ny fahatapahany farany. Ny iray amin'ny roa tonta dia miafara amin'ny tsy fahombiazany hatrany, ny fantsom-bolan'ny tariby rehefa avy niaritra zava-tsarotra arivo na nijanona tsy niasa fotsiny izy ireo. Miaraka amin'ny MA750i tsy hanana an'io olana io ianao.
Ary io ve no iray amin'ireo tanjaky ny écouteur-ny dia ny famaranana azy; Ny firafitry ny RHA MA750i iray manontolo dia vita amin'ny Vy vy tsy misy fangarony 303F, izay manondro ny kalitaon'ny vokatra. Hitanay amin'ny satroka, fanaraha-maso ary ny seranan-tsambo mpampitohy ity fitaovana ity.
Fahagagana iray hafa tena tsara dia ny safidin'ireo fitaovana ho an'ny tariby: fingotra. Ny tariby dia matevina kokoa ary arovana tsara kokoa ary koa manome fahatsapana kalitao izay tsy mitovy amin'ny headphones amin'ny vidiny mitovy amin'izany. Te hanana bebe kokoa ve ianao? Na eo aza ny fahatongavany amin'ny tranga hitaterana ny headphone dia tsy nisy fomba iray hahatonga azy ireo hikorontana. Tsy vazivazy, maimaimpoana ireo headphones RHA MA750i. Ary izany dia mendrika fanjakana iray.
Veloma mandany fotoana amin'ny famoahana ny findainao
Ny fanamafisana ny fiarovan-doha dia miorina amin'ny fanohanana izay mifanaraka tsara amin'ny sofina, miaraka amin'ireo tariby mandeha eo amboniny. Mety ho an'ireo atleta te hankafy kalitao tsara an'ny MA750i satria tsy miala amin'ny toerany izy ireo.
Ny mpampitohy 3.5 mm dia mampiditra loharano eo ivelany izay hisorohana ny tariby tsy ho simba na ho simba, antsipiriany iray hafa izay mampiseho ny kalitaon'ny famaranana. Ary raha ampianay fa ny mpampitohy dia nopetahany takela-bolamena hanatsarana ny kalitaon'ny feo, manana eo alohanay ny iray amin'ireo vokatra miaraka amin'ny famaranana tsara indrindra eny an-tsena. Raisina an-tsaina izany ny vidiny dia eo anelanelan'ny 89 sy 99 euro miankina amin'ny maodely, ny headphones RHA MA750i dia safidy hodinihina.
Ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny headphones amin'ity karazana ity dia ny hoe aorian'ny fampiasana maharitra dia matetika no miteraka tsy fahazoana aina. Amin'ity tranga ity dia efa nieritreritra ny zava-drehetra ry zalahy tao amin'ny RHA. Ary azy ireo ve izany fitadidiana foam sofina pads dia mety tsara amin'ny sofina, mamerina ny endriny voalohany rehefa esorinao izy ireo. Ilay fitaovana novokarin'i RHA dia manolotra fampisehoana mahatalanjona fotsiny.
Nihaino mozika aho adiny efatra misesy amin'ny dia iray ary tsy nanelingelina ahy mihitsy izy ireo, zavatra tiako. Raha tsy maintsy esorinao koa ny fitaovam-pandrenesana dia mijanona ao an-tsofina ny éphone fa tsy milatsaka.
Inona koa no angatahina? TSARA tsara izany, izay asany lehibe indrindra.
Ny kalitaon'ny feo amin'ny haavon'ny farany
Hitanay fa manana ny headphones RHA MA750i famaranana mahatalanjona ary mahazo aina tokoa izy ireo. Fa ahoana ny fanenony? Raha tianao ny écouteur misy basse mahery dia ho tianao izany.
Ary i RHA dia nahavita fifandanjana tsara, nefa tsy nahatratra ny fihoaram-pefy be an'ny headphones pseudo Beats. Miaraka amin'ny afovoany izay manome feo ampy tsara nefa tsy very kalitao, afaka miteny tsy misy fisalasalana aho fa Ny MA750i dia manolotra fampisehoana faran'izay tsara ho an'ny headphones misy vidiny avo kokoa. Fa miaraka amin'ny karazana mozika saingy.
Efa nanandrana karazana mozika maromaro aho ary mazava be ny fehin-kevitro: raha tianao ny mozika pop, mozika klasika, rock, mavesatra na elektronika dia ny MA750i no safidy atolotra indrindra. Fa kosa Raha tianao hip hop dia tsy hankafizinao io fomba mozika io 100% amin'ireo headphone ireo. Andininy tokony hotadidina.
Ny amplitude ny feo amin'ny headphones MA750i dia iray amin'ireo tanjaka lehibe, manolotra a fisarahana tena tsara mendrika an-telefaona avo lenta ary tsy latsaka ambanin'ny 200 euro ny vidiny.
Raha ny fitokanana amin'ny tabataba, RHA dia manome antoka fa manome vokatra tsara ny vokatra ao aminy. Amin'ny fotoan'ny fahamarinana, na dia marina aza izany aza manolotra fanafoanana feo mavitrika, ny famolavolana ny headphone miaraka amin'ny tadin'ny sofina dia mamela ny feo maro ho voasakana.
Mazava be ny fehin-kevitro: Ny RHA MA750i dia iray amin'ny finday avo lenta indrindra eny an-tsena, raha tsy ny tsara indrindra. Sarotra ny mahita vokatra manome ireo tombony ireo amin'izany vidiny izany. Ary eo an-tampony izy ireo dia miaraka amin'ny antoka 3 taona ...
Manana ve ianao? Ie. Misy maodely roa, ny MA750 sy ny MA750i. Ny maha samy hafa azy dia ny modely "i" mampiditra remote izay ahafahanao mifehy ny feony sy mamaly antso, na dia mifanentana amin'ny fitaovana iOS fotsiny aza. Notsapaiko tamin'ny Android izany ary tsy mandeha ny fifehezana ny volume. Na dia marina aza fa afaka mamaly antso ianao, dia maheno ny feonao amin'ny alàlan'ny headphone ianao izay mety hahasosotra. Ny vahaolana? Vidio ny maody MA750 izay mitentina 89 euro.
Famaranana mahavariana sy fikarakarana vokatra fotsiny
Maimaimpoana ny headphones RHA MA750i
Na dia manana rafitra fanafoanana feo mavitrika aza izy ireo dia manatanteraka tsara ny asany
Kalitaon'ny feo mendrika an-telefaona avo lenta
Tsy ny rehetra no vonona handoa 90 euro ho an'ny headphone
Raha tianao hip hop ireo headphone ireo dia tsy mety indrindra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » RHA MA750i, mampiray ny kalitao sy ny endrika am-peo
Francisco Cruz Badilla dia hoy izy:
Hitahiry vola aho hividianana azy ireo, resy lahatra aho. Misaotra anao
Valiny tamin'i Francisco Cruz Badilla
Ho an'ireo tia mozika dia tsy misy maharatsy izany!
Valiny tamin'i Edward
Tetikasa Ultimate Browser, tranokala fanokafana loharano misokatra avo lenta sy maivana
Xiaomi Mi Band 2 miaraka amin'ny efijery mikasika